ताल Bled | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | स्लोभेनिया, के हेर्ने
स्लोभेनिया यो एक देश हो जुन बिस्तारै युरोपेली पर्यटन स्थलहरू बीच जग्गा प्राप्त गर्दैछ। सुन्दर छ! यसको मध्यकालीन शहरहरू र यसको परिदृश्यहरूका बीचमा, सत्य यो हो कि यो प्रशंसकहरू बटुल्न बन्द गर्दैन। यसको प्राकृतिक मोती मध्ये एक उदाहरणका लागि, ताल Bled.
तालको कुनै पनि फोटो पोष्टकार्ड जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यदि स्लोभेनिया तपाईंको भ्रमण गर्ने गन्तव्यहरूको बीचमा हो भने, यस सुन्दरको भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्। अल्पाइन ताल। यस्तो देखिन्छ कि कुनै पनि समयमा एक परी यसको पानीबाट बाहिर आउँनेछ।
1 ताल Bled
2 लेक ब्लेड हेर्नुहोस्
यो तथाकथित मा स्थित एक ताल हो जुलियन आल्प्स, उत्तर पश्चिमी स्लोभेनियामा। यो देशको राजधानी लजुलानाबाट केवल kilometersj किलोमिटर टाढा, त्यसैले यो जाने र यसलाई मिस गर्न वास्तवमै शरारती हुनेछ किनकि दूरी केही पनि छैन।
ताल ताल हो जुन आंशिक टेक्टोनिक हुन्छ, आंशिक हिमनदीय उत्पत्ति। सबै उसको वरिपरि ज fore्गल र पर्वतहरू छन् र एक शहर, Bled, मध्ययुगीन उत्पत्ति को। पानी ऐनामा चौडाई १, meters1380० मिटर, २,२०० मिटर लामो र औसत गहराई करीव thirty० मिटर छ।
तालको एउटा टापु छ, bled टापु, Blejski otok स्लोभेनियालीमा, धेरै संग धार्मिक भवनहरू भर्जिन मरियमलाई समर्पित। सब भन्दा मिति १th औं शताब्दीको अन्तदेखि र सबैभन्दा पुरानोसँग अझै १ G औं शताब्दीको मध्यदेखि केही गोथिक शैलीको फ्रेस्कोहरू छन्। त्यहाँ केहि बारोक शैलीका निर्माणहरू छन्।
पुरानो चर्च अझै पनी एक छ Meter२ मिटर अग्लो टावर जुन तालको किनारबाट देख्न सकिन्छ, र यसको बारोक सीढ़ी भित्र १ 99 देखि 1655 XNUMX ढु steps्गाको चरणहरू गठन गरिएको छ।
राम्रो कुरा त्यो हो चर्च अझै पनि विवाहहरु को संचालन गर्न प्रयोग गरीन्छ त्यसोभए कल्पना गर्नुहोस् कि यहाँ विवाह गर्न कस्तो हुनुपर्छ ... अद्भुत! परम्पराले संकेत गर्दछ कि दुलहीले दुलहीलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न, घण्टी बजाउँन, र एक इच्छुक गर्नै पर्छ। र सबै चीज एक लाई जनाउँछ पौराणिक कथा...
दन्त्यकथाले भन्छ कि कुनै समय एकदमै कलिलो विधवा ब्लेड क्यासलमा बस्थे। उनका पतिलाई चोरहरूले बाँधेर राखेका थिए र उनको शरीरलाई पानीमा फ्याँकिएको थियो। उनी घाटाबाट नष्ट भइन् र उनको सबै चाँदी र सुन पगाले उनको प्रेमको सम्झनामा टापुको चर्चको लागि घण्टी बनाउन। सत्य यो हो कि घण्टी कहिले आई सकेन किनभने यो बोकेको डु boat्गा आँधीबेहरीमा डुबे।
झनै निराश भएकी ती विधवाले आफ्नो सबै सरसामान टापुमा नयाँ चर्च बनाउन बेचे, महल छोडेर रोममा भिक्षुणी भए। उनको मृत्यु पछि, ड्युटीमा पोपले उनको दु: खपूर्ण कथा सिके र अन्तमा एउटा घण्टी बन्ने निर्णय गरे, जसले यो पनि भन्यो कि जसले तीन पटक घण्टी बजायो र भगवानमा विश्वास राख्छ उसले उसको इच्छा पूरा भएको देख्नेछ। त्यसैले दुलहा र दुलही को परम्परा।
लेक ब्लेड हेर्नुहोस्
त्यहाँ छ तालको चारैतिर छ किलोमिटर लामो मार्ग र यो खुट्टै पैदल वा साइकल द्वारा सुखद पैदल मा गर्न सकिन्छ। यात्रा गर्ने क्रममा तपाईंसँग ताल, जsts्गल, महल र पहाडहरूका उत्कृष्ट दृश्यहरू छन्। त्यहाँ सुविधायुक्त स्थानहरूमा अवस्थित एक आराम गर्न बेन्चहरू पनि छन् जुन तपाईंलाई दृश्यहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ: टापु, पहाडहरू, ताल तालले ...
तटबाट नै तपाईले भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ घोडा कोरिएको गाडी सवारी र ती वरिपरिक मार्गहरू यात्रा गर्दछन्। कोचमान भनिन्छ फिक्सरहरू। त्यहाँ परम्परागत काठका डु boats्गा पनि छन् प्लेटहरू, जसले तपाईंलाई तटबाट टापुमा लैजान्छ। तिनीहरू लाईन भनिने रोयर्स द्वारा सञ्चालन गरिन्छ pletnars र गर्मी मा तिनीहरू आउँछन् र सधै जान्छन्।
तालको आनन्द लिनको लागि अर्को राम्रो बुँदा यसको आफ्नै हो Bled महल यो चट्टानी चट्टानबाट झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ। यो धेरै सुन्दर छ, मितिबाट XII शताब्दी र यो एक चाखलागि अझै संचालनमा संग एक रोचक संग्रहालय घर। तपाईं महल रेस्टुरेन्टमा तिनीहरूको वाइनको स्वाद पनि लिन सक्नुहुनेछ र गर्मी महिनाहरूमा तपाईं किल्लाको स्वामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ वा समयमा आर्चुरी टूर्नामेंट हेर्न सक्नुहुन्छ। मध्यकालीन दिनहरू।
यो पनि एक छ सुन्दर चैपल आँगनको साथ गोथिक शैली। यो १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र पछि के बारोक मर्मत गरिएको छ। वेदीको छेउमा जर्मन सम्राट हेनरी द्वितीय र उनकी श्रीमती कुनिगुण्डा र केही राम्रा फ्रेस्कीहरूका चित्रहरू छन्। महलका केही भित्री कोठाहरू प्रदर्शन हुन र गढी र यसको वास्तु विकासको इतिहास वा जीवनमा यसमा जीवन कस्तो थियो भनेर देखाउन तयार छन्।
सत्य यो हो कि तपाईं महललाई मिस गर्न सक्नुहुन्न किनभने यसले लेक ब्लेड र यसको सुरम्य टापुको सबै भन्दा राम्रो दृश्य प्रदान गर्दछ।
त्यसोभए, टापुमा जानको लागि एक मात्र तरिका ती राम्रा काठका डु boats्गामा छ। तपाईंले यसको भ्रमण गर्न भुक्तान गर्नुपर्नेछ र टिकटमा पनि घण्टा टावरको भ्रमण समावेश छ यसले प्रदान गर्ने मनोरम दृश्यको आनन्द लिन। एक वयस्क भुक्तानी गर्दछ6यूरो, Students जना विद्यार्थीहरू, बच्चाहरू केवल १ यूरो र परिवारहरूले १२ यूरोको संयुक्त टिकट तिर्छन्। यी २०१4को लागि मान्य मूल्य हो। तपाईं टापुको वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई त्यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले भर्खरै दिमागमा राख्नुपर्दछ कि यही पृष्ठमा यो चेतावनी दिइएको छ अर्को वर्ष घण्टा टावरको नविकरण कार्य सुरु हुनेछ त्यसोभए यो केहि समयको लागि बन्द रहन्छ। ढु climb्गा चरणहरू पुन: स्थापना हुनेछ यसलाई सुरक्षित चढ्न, र पुरानो घडीको लागि।
वेबसाइटमा तपाईले त्यो पनि फेला पार्नुहुनेछ तालको वरपर एउटा होटल छ, सरल तर सुन्दर, शैली को B&B, यो एक रात 45 98 देखि 300। यूरो सम्म लागत। यसले वाइफाइ प्रदान गर्दछ, यो तालबाट सय मिटर जति, स्यान मार्टेनको चर्चको छेउमा, महलबाट XNUMX०० मिटर जति छ र यस टापुसँग एक किलोमिटर टाढा छ, यसमा बार, निजी पार्कि,, टिभी र निजी बाथरूमको कोठा छ। कसरी?
अन्ततः, boondocks। यो देशको सब भन्दा सुन्दर कुनाहरू मध्ये एक हो र साथै सबैभन्दा प्रसिद्ध पनि चिनिन्छ किनभने त्यहाँ तातो स्प्रि .हरू छन् जुन पछिल्ला शताब्दीको सुरूदेखि नै लोकप्रिय छ। वास्तवमा, Bled लाई ख्याति प्राप्त छ स्वस्थ रिसोर्ट अस्ट्रिया र हंगेरीमा सबैभन्दा सुन्दर। उचाई संग यहाँ रहन, एक सिफारिश तर महँगो होटल Vila Bled, १ led s० को दशक बाट हो।
र अब हो, अन्तमा, तालबाट धेरै टाढा छैन भिन्गर क्यान्यन, सुन्दर, काठको पुलहरू जसले तपाईंलाई यसको किलोमिटर लामो यात्रा गर्न र यसको झरना र पोखरीहरूको कदर गर्न अनुमति दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » स्लोभेनिया » ताल Bled
Trujillo मा के हेर्ने